Warframe एक व्यापक अपडेट प्राप्त गर्दछ ग्याजेट समाचार
को लागी नयाँ अपडेट PC नाम दिइएको १ 14 अपडेट गर्नुहोस्: "द वक्की सेफलोन" नयाँ प्रयोगकर्ता अनुभवलाई सरल बनाउने र ब्रह्माण्डमा खेलाडीलाई अझ बढी डुबाउनेमा केन्द्रित छ Warframe। यस अपडेटमा पूर्ण रूपले नयाँ डिजाइन गरिएको इन्टरफेस, र प्लेयरहरूका लागि नयाँ जहाज, लिसेट समावेश छ। यो एक नयाँ मिशन प्रणाली हो जुन सुरू हुन्छ "भोरको बाँध" र भिडियो गेम गेमरहरूको लागि अधिक पहुँचयोग्य बनाउँदछ। त्यहाँ नयाँ र लामो-प्रतीक्षित पाल्तु जनावरहरू पनि छन्, जस्तो कि कुब्रो, र नयाँ वारफ्रेम, मिराज, भ्रम की स्वामिनी, र अधिक धेरै।
"हामी यस अद्यावधिकमा बीटाबाट बीलाई पुनः प्रयोग गर्दैछौं," उनले ठट्टामा उडाए स्टीव सिन्क्लेयरका रचनात्मक निर्देशक डिजिटल चरम। गम्भीरतापूर्वक, परिभाषा गर्न हामीलाई नयाँ शब्द चाहिन्छ यदि केहि 'बेटा' मा छ भने। यसले पूर्ण रूपमा विकास प्रक्रियालाई समेट्दैन जुन वारफ्रेम जस्ता खेलहरू उनीहरूको जीवनकालभरि हुन्छन्। हाम्रो खेलाडीहरूबाट असीमित प्रतिक्रिया प्राप्त गर्दै र यसलाई खेलमा निरन्तर सुधार गर्नको लागि हाम्रो आफ्नै महत्वाकांक्षासँग जोड्नाले विकास प्रक्रियाको वास्तविक राज्यको लागि शब्द खोज्न गाह्रो हुन्छ। कहिलेकाँही यो प्रक्रियाको मतलब यो हो कि हामीले खेलको मौलिक घटकहरू फेरि गर्नु पर्दछ, जस्तै प्लेयर अनुभव प्रणाली। यो कार्य प्रणाली हाम्रो लागि पूर्ण नयाँ अनुभव भएको छ - जुन खेलाडीहरूसँग सिधा सम्पर्कको तथ्य हो: - उनीहरूलाई खेल परिमार्जन गर्ने, यसलाई सुधार गर्ने, के परिमार्जन गर्ने कुरा जान्ने र यसको लागि धन्यवाद, जुन खेलले त्यो कहिल्यै नभएको बनाएको छ। के हामी कल्पना गर्यौं कि यो become हुन सक्छ।
को समुदायको घनिष्ट सम्बन्ध Warframe विकास टोली विकास संग भुक्तानी गरेको छ संग: १० करोड विश्वव्यापी दर्ता खेलाडीहरू प्लेटफर्मका लागि PC y प्लेस्टेशन4एक बर्ष भन्दा बढीमा, र अझै पनि ओपन बीटा संस्करणमा। किकस्टार्टरको नजिकको विकास ढाँचा, र भिडियो गेमको लागि समुदायको उत्कटताले यसलाई सबैभन्दा डाउनलोड गरिएको भिडियो भिडियो बनाउन मद्दत गरेको छ। PS4 र सम्झौतामा पुग्नको लागि जुन यसलाई सुरू गर्न अनुमति दिनेछ Xbox एक यो गर्मी भर मा।
नयाँ अपडेटमा निम्न मुख्य सुविधाहरू समावेश छन्:
नयाँ प्रयोगकर्ता अनुभव - एक पूर्ण पुन: डिजाइन गरिएको इन्टरफेस, नयाँ विकल्प र तपाईंको व्यक्तिगत जहाज, लिसेटमा आफैलाई डुबाउनुहोस्। Warframe मा धेरै मिसनहरु तपाईलाई पर्खिरहेका छन्, र तपाई खेलका सबै पक्षका बारे बढि जान्न सक्षम हुनुहुनेछ: खेलको बखत अधिक जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्, कथा सिक्नुहोस्, खेल मोडमा सजिलो पहुँच, मेनूहरू, इत्यादि। थप रूपमा, तपाईं अर्डिसलाई भेट्नुहुनेछ, जहाजको सेफलन, एक आवाज जसले तपाईंलाई लिसेट मार्फत मार्गदर्शन गर्दछ।
Mascotas - नयाँ मिसनले तपाईंलाई जेनेटिक फाउन्ड्रीमा पहुँच दिन सक्छ, जुन हाम्रो आफ्नै जहाजमा जैविक नमूनाहरू विकास गर्न प्रयोग गरियो। कुब्रो अण्डा स collecting्कलन गरेर जीन फाउन्ड्रीमा उनीहरूलाई कुब्रो बढाउनुहोस्। यो कुब्रोसँग फरक व्यक्तित्व र फरक क्षमताहरू छन्, दुवै लडाईमा र यस बाहिर। तपाइँ तपाइँको कुब्रोलाई लडाईमा अझ प्रभावकारी बनाउन सक्नुहुन्छ र उहाँलाई शक्तिशाली मोडहरूको साथ लैजानुहुन्छ। तपाइँको कुब्रोको आनुवंशिक छापहरू सिर्जना गर्नुहोस् जुन तपाइँ तपाइँको टेन्नो साथीहरूसँग व्यापार गर्न सक्नुहुन्छ र तपाइँको उत्तम पाल्तु जनावरहरू सिर्जना गर्न तिनीहरूलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ।
नयाँ Warframe - भ्रम को मिस्ट्रेस. mirage शैली र शक्ति को एक प्रदर्शन मा दुश्मन को भ्रमित गर्नुहोस्। यसको शक्तिहरू समावेश:
हलको दर्पण - मिराजले दुश्मनलाई भ्रमित गर्न र विचलित गर्न स्टन्टम्यानहरूको समूह बनाउँछ।
ट्रिक - एक प्राकृतिक prankster को रूप मा, मिराज नजिकैका दुश्मनहरु को पासोमा जाल प्रयोग गर्दछ।
ग्रहण - प्रकाशमा उभिएर, मिराजले भारी क्षतिको सौदा गर्दछ जब छायाँले उनलाई अनुसरण गर्न गाह्रो बनाउँदछ र चोट पुर्‍याउन अझ गाह्रो हुन्छ।
समपार्श्व - ऊर्जाको एक ओर्ब सुरू गर्नुहोस् जसले सबै दिशामा लेजरहरू शूट गर्दछ। यसलाई फेरि सक्रिय गर्नाले प्रिज्म विस्फोट हुनेछ, कुनै पनि नजिकका दुश्मनहरूलाई अन्धा बनाउँदै।
एडभेन्चर - अनलक गर्न योग्य कठिनाई स्तरहरूको चयनको साथ नयाँ रोमांच अन्वेषण गर्नुहोस्। यो नयाँ वारफ्रेम अनुभव "भोरको बाँध" को साहसिक कार्यबाट शुरु हुन्छ।
नयाँ लुकेको क्षेत्र संघर्ष - नयाँ खेलाडी बनाम खेलाडी खेल मोड जुन अवस्थित सौर रेल द्वन्द्व गेम मोडलाई प्रतिस्थापन गर्दछ। कुन कुन वंश वा गठबन्धनलाई छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईं मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ र बहु-चरण मिशनमा आक्रमणकर्ता वा डिफेन्डर्सहरूको रूपमा खेल्नुहोस्! प्रति चार चार मानव खेलाडीहरू खेल्न सक्छन्, स्पेक्टर्सको साथ खाली खाली ठाउँहरू भर्न।
अकजानी - मिराजको मनपर्ने हतियार, यी दोहोर द्रुत-फायर पिस्तल घातक छ।
सिल्वा र एजिस - हावा हतियार डिजाइन प्रतियोगिता को विजेता द्वारा बनाईएको एक तरवार र ढाल: SilverBones।
विस्तारित खेल मोडहरू - पीडितले एरिसलाई निको पारे। Hive Sabotage, संहार र जीवन रक्षा मिशनहरू अब उपलब्ध छन्!
La २०१ 14 अपडेट गर्नुहोस् पहिले नै जारी गरिएको छ PC र www.warframe.com मा नि: शुल्क डाउनलोड गर्न सकिन्छ। को खेलाडीहरू प्लेस्टेशन4तिनीहरूले यसलाई केही हप्तामा प्राप्त गर्नेछन्, साथ साथै नयाँ प्रयोगकर्ता अनुभव, जसलाई कन्सोलको नियन्त्रणको लागि अतिरिक्त विकासको आवश्यकता पर्दछ। सोनी.
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » हाम्रो बारेमा » Warframe एक व्यापक अपडेट प्राप्त गर्दछ
अब तपाईं डाटा एक Wii U बाट अर्कोमा हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ